तपाईंको आईफोनमा भएको तर नदेखिने एप कसरी फेला पार्ने ? यस्तो छ सजिलो तरिका - Technology Khabar
» तपाईंको आईफोनमा भएको तर नदेखिने एप कसरी फेला पार्ने ? यस्तो छ सजिलो तरिका
एप्पलको आईफोन लुकेका सुविधाहरू र युक्तिहरूले भरिपूर्ण छन् जुन हामीले निरन्तर खोजी गरिरहेका छौं। उदाहरणको लागी, के तपाईंलाई थाहा छ नोट एपमा नदेखिने कागजात स्क्यानर हो, र यो राम्रो पनि छ।
ट्विटर र ब्लगमा पपअप गर्दै गरेको हालैको नदेखिने सुविधा अर्को प्रकारको स्क्यानर हो, यो क्यूआर कोडहरूलाई समर्पित, र यो क्यामरा एपमा निर्मित भन्दा उत्तम छ।
हो, तपाईं नियन्त्रण केन्द्रमा सर्टकर्ट प्रयोग गरी क्युआर कोडहरू स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ, वा क्यामरा एप खोल्नुहोस् र यसले क्यूआर कोड स्क्यान गर्दछ। र तपाईं सहि हुनुहुन्छ। ती दुवै विधिहरू ठीकसँग काम गर्दछन्।
तर समर्पित कोड स्क्यानर एपले काम स्क्यान कोडको बारेमा हेर्न चाहेको अधिक जानकारी प्रस्तुत गर्दै एक कदम अगाडि जान्छ।
उदाहरणको लागी, क्यामरा एपले लिंक खोल्न वा जानकारी देखाउन स्क्रिनको शीर्षमा एक सानो नोटिफिकेसन प्रयोग गर्दछ, जबकि समर्पित कोड स्क्यानर एपले तपाईले भर्खर स्क्यान गरेको क्यूआर कोड भित्र कस्तो छ भनेर धेरै स्पष्ट बनाउँदछ। तर यहाँ महत्वपूर्ण विषय भनेको के हो भने कोड स्क्यानर एप तपाईंको होम स्क्रिनमा फेला पर्दैन, र यो आईओएस १४ को नयाँ एप लाइब्रेरीमा फेला पर्दैन ।
जहाँसम्म कोड स्क्यानर एप फेला पार्ने एक मात्र तरीका भनेको आईफोनको स्पटलाइट खोज सुविधा प्रयोग गर्नु हो। तपाईंको आईफोनको होम स्क्रिनमा जानुहोस् र स्क्रिनको बिचमा स्वाइप गर्नुहोस्।
तपाईंको स्क्रीनको शीर्षमा सर्च बार आउनेछ र त्यसको तल एप र सर्टकट सुझावहरूको साथ देखा पर्नेछ। यसमा कोड वा स्क्यानर टाइप गर्नुहोस्। तपाईंले टाइप गर्दा, तपाईंले कोड स्क्यानर एप आइकन एक एप सुझावको रूपमा देखा पर्नुहुनेछ। यसलाई खोल्न ट्याप गर्नुहोस्। यदि तपाईंको फोनले यसलाई पढ्न संघर्ष गरिरहेको छ भने स्क्रिनको तलको फ्ल्यासलाइट आइकनले कोड पत्ता लगाउन फ्ल्यासको रूपमा कार्य गर्दछ ।